]Nangokuvikela boron Nitride Ceramics induku tube for Olubunjiwe Metal Ukuphathwa
Nangokuvikela boron Nitride Ceramics induku tube for Olubunjiwe Metal Ukuphathwa
Boron nitride Ceramic tube induku, eyaziwa nangokuthi i-graphite ezimhlophe, has isakhiwo esifanayo ne-graphite. It has ukwahlukanisa okuhle kagesi, conductivity ezishisayo, esihle ezishisayo ukushaqeka ukumelana nokuqina zamakhemikhali.
Hot ecindezelwe olunezinhlangothi boron Nitride Imikhiqizo bobumba, liveza nhlanganisela eyingqayizivele zamakhemikhali, ugesi, mechanical izakhiwo ezishisayo, okwenza kube efanelekayo anhlobonhlobo highperformance applications.We zezimboni angakunikeza ubumsulwa okusezingeni eliphezulu noma zifake umehluko isibopho boron nitride zobumba, ephelele isixazululo esekelwe izinhlobo umkhakha amakhasimende funa.
Hot Sicindezelwe boron Nitride boron nitride ingasetshenziswa ukwakheka crucibles yokuncibilikisa Semiconductors futhi ephezulu lokushisa iziqukathi yokusansimbi, Semiconductor ukushisa-kwakuqeda ukwahlukanisa izingxenye, ephezulu lokushisa amabombo, thermowells, zesikhunta ingilazi-ukwakha.
Kuyinto uhlobo olusha ephezulu lokushisa ukumelana impahla super-kanzima esetshenziswa ukwenza sokuprakthiza izingcezu, amathuluzi athile, kanye namathuluzi ukusika.
Excellent ukwahlukanisa kagesi kanye ezishisayo conductivity ukwakheka BN iyasiza njengoba echibini ukushisa e ephezulu amandla izicelo electronic. Amandla ayo qhathanisa kahle nge beryllium oxide, aluminium oxide, kanye nezinye izinto electronic emabhokisini futhi kulula machinable namabumbeko oyifunayo nosayizi.
Izinga Lokushisa Eliphezulu Izindawo
Temperature ukuzinza kanye ukumelana enhle kakhulu ezishisayo ukushaqeka ukwakheka BN okokusebenza ekahle kwezinwele eziqine ephezulu lokushisa ezindaweni ezifana nemishini plasma arc Welding, umthombo okusheshayo eziyizingcwecwana, futhi Semiconductor imishini crystal ukukhula& ukucubungula.
Olubunjiwe Metal Ukuphathwa
BN kuyinto wezinto ezingaphili, ama inert, nonreactive nge nosawoti halide kanye reagents, futhi ungabi manzi by izinsimbi kakhulu oncibilikisiwe futhi slags. Lezi zimo zokuma, kuhlangene ongaphakeme ukunwetshwa ezishisayo, wenze kube ekahle esibonakalayo izimpahla ezisetshenziselwa ahlukahlukene oncibilikisiwe metal izinqubo.
Boron Nitride Ceramics tube induku
Hot Sicindezelwe Sintering futhi Chemical umusi sebethule
olunezinhlangothi boron Nitride bobumba
amasheya amaningi, ukulethwa isikhathi emhlabeni 10-20days. ngolwandle noma ngomoya njengesicelo samakhasimende
BN + yemibhalomfihlo
Ubuhlobo obuseduze Ukwakheka
Boron oxide aluminiyamu
Igumbi lokushisa Electric Resistivity (Ω · cm)
Max Ukusebenzisa lokushisa (℃)
Ngo Akusebenzi negesi
Ngo Umshini High (Long Time)
Three-Point Bending Amandla (MPA)
Amandla compressive (MPA)
Thermal Ukunwetshwa Coefficient (20-1000 ℃) (10-6 / K)
Thermal conductivity (W / m · k)
Phula izindandatho zokuphonswa kwensimbi evundlile
Ama-Feedthroughts for aphezulu voltage imishini
Izikebhe ze-Evaporator ze-aluminium metallization
Ama-nozzles wezinsimbi ezingezona
Izakhi zokukhiqiza ze-semiconductor
IMISEBENZI YOKUQHAWULA KAKHULU
Ama-Wafeers Offession Wefence
UBoron Dopant for Silicon wafer
Ama-insulators ku-PVD / CVD Vacuum Coating Chamber
Izakhi ze-elekthronikhi zihlanganisa ama-jigs
Izingxenye ze-elekthronikhi & substrates
Ama-Spacers ngengilazi ancibilike futhi angenzi